Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: isbarbardhigga saxda ah | Androidsis
DaniPlay | 28/06/2021 12:02 | Mobiles
Soo saaraha Aasiya Realme waxaa loo aasaasay sanado sidii mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan, Iyagoo siinaya moodooyin kala duwan qiimo macquul ah runtii. Naqshad hoos ugu dhacda wax yar qiimaha laga bilaabo Juun 16 ilaa 25 on AliExpress Waa Realme Narzo 30 5G, oo ah taleefan casri ah oo si dhammaystiran u sameeya dhammaan noocyada codsiyada iyo ciyaaraha.
Waxaan ku xusuusinaynaa inaad awoodid halkan ka iibso Realme Narzo 30 5G qiimaha ugu fiican.
Narzo 30 5G waa nooc dhaqaale haddii la barbar dhigo Realme GT 5G, waa laba aaladood oo isku xidhiidh ah, in kasta oo lagu kala duwan yahay dhawr ka mid ah tilmaamaha, oo ay ku jirto qalbigiisu. Naqshadeynta labada nooc waa mid aad u taxaddar badan, waxay leeyihiin isku mid interface iyo nidaam hawlgal.
2 Kaamirooyinka waji ka waji
3 Batariga, muuqaalka aasaasiga ah
4 Isku xirnaanta taleefannada
7 Helitaanka iyo qiimaha
Farqiga u dhexeeya Realme Narzo 30 5G iyo Realme GT 5G wuxuu ka bilaabmayaa guddiga ay koraan, midka hore waa 6,5-inch LCD leh xal buuxa oo HD + ah iyo 90 Hz heer cusbooneysiin ah, midka labaadna waa 6,43-inch AMOLED (Full HD +) oo wata heerka cusbooneysiinta 120 Hz. Labaduba waxay ku daraan kamarad feerka daloolka hore iyo naqshad aad u midab badan labadoodaba.
Processor-ka labada moodle waxay ka yimaadeen soo saare kala duwan, Narzo 30 5G wuxuu ku dhejinayaa MediaTek Dimensity 700, oo ah qalab awood u leh inuu sameeyo ka hor hawlgal kasta oo ka mid ah barnaamijyada iyo cayaaraha, GT 5G wuxuu isku darayaa Snapdragon 888 oo awood leh sida caadiga ah. Qeybta garaafka, MediaTek wuxuu ku darayaa Mali-G57 MC2 GPU, halka Qualcomm uu ku dhagan yahay Adreno 660 ee awoodda badan, oo leh waxqabad la yaab leh markii la isticmaalayo codsiyada kala duwan iyo ciyaarihii ugu dambeeyay.
Muuqaal kale oo lagu muujiyo waa xusuusta iyo keydinta, Realme Narzo 30 5G waxay la timaadaa hal ikhtiyaar oo RAM ah oo gaaraya 4 GB, Realme GT ayaa siisa seddex, oo leh 6, 8 iyo ilaa 12 GB. Horeba kaydinta wax la mid ah ayaa dhacaya, Narzo 30 wuxuu ku sii jiraa xulashada 128 GB (waa la ballaarin karaa MicroSD) iyo GT-ga oo ku jira xulashooyinka 128 iyo 256 GB, sidoo kale waxaa lagu ballaarin karaa MicroSD.
Kaamirooyinka waji ka waji
Gadaal gadaashiisa labada taleefan waxay ku xirtaan seddex lenses, faraqa wuxuu ku dhacaa tirada megpixels ee mid iyo midka kale. Kaameradda ugu weyn ee qaabka Realme Narzo 30 5G waa 48 megapixels, midka labaadna waa 2 MP macro iyo midka saddexaad oo ah 2 megapixel monochrome.
U guurista kaamirooyinka gadaal ee Realme GT, midka koowaad waa 64 megapixels, kan labaadna waa 8 megapixel wide angle iyo kan seddexaad oo ah 2 megapixel macro, caawiye muhiim ah. Horeba xagga hore ee Realme Narzo 30 5G Waa 16 megapixels, sida ku jirta Realme GT, taas oo ah dareemayaal leh tiro la mid ah megapixels, oo ku habboon qaadashada sawirro iyo fiidiyoowyo wanaagsan.
Batariga, muuqaalka aasaasiga ah
Mid ka mid ah waxyaabaha soo fiicnaanayay muddo ka dib waa ismaamulka taleefannada, waana wax ay macaamiisha aaladaha qaddarinta ku qanacsan yihiin. Realme Narzo 30 5G waxay fuushaa 5.000 mAh, oo ku filan in lagu adkeysto In ka badan hal maalin oo hawlgal ah, Realme GT waxay u dhacdaa 4.500 Mah.
Mid ka mid ah Narzo 30 tusaale ahaan wuxuu noqonayaa lacag deg deg ah 18W, Culaysku badanaa wuxuu ku saabsan yahay 50 daqiiqo laga bilaabo 0 illaa 100%, waqti aad u sarreeya. Realme GT waxay leedahay lacag dhan 65W oo deg deg ah, iyadoo ku shubaysa taleefanka casriga ah nus saac ka yar 0 ilaa 100%, waana mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan suuqa hadda jira.
Isku xirnaanta taleefannada
Dhammaan isku xirnaanta waxaa lagu soo dhaweyn doonaa taleefoonnada, maadaama ay muhiim tahay in lagu xirmi karo internetka, aaladda, wareejinta xogta iyo waxyaabo kale oo badan. Realme Narzo 30 5G waxay kujirtaa 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, Dual SIM iyo dhageysiga minijack headphone.
Si kastaba ha ahaatee, Realme GT waxay ku dareysaa wax badan ama ka yar isku xirnaanta, 5G (Dual), Wi-Fi 6 (xawaare sare kiiskan), Bluetooth 5.2, NFC iyo GPS Dual. GT-da shaki la’aan waa taleefan casri ah oo dammaanad leh marka ay timaado isku xirnaanta xawaaraha sare, gaar ahaan nooc kasta oo xiriir ah.
Wax badan kuma kala duwana marka ay timaaddo rakibidda nidaamka hawlgalka, labaduba waxay ku daraan Android 11 hoosta maaskaro ee Realme UI 2.0, mid ka mid ah lakabyada soo fiicnaanayay sannadihii la soo dhaafay. Realme waxay ku samaynaysay horumar badan, marka lagu daro inay ku dartay xulashooyin badan si ay ula socoto kuwa kale sida MIUI ama EMUI.
Hufnaan ayaa noqota marka la isticmaalayo xaddiga xusuusta mobiil kasta, tusaale ahaan Realme Narzo 30 5G wuxuu leeyahay 4 GB module ah 6, 8 iyo 12 GB on Realme GT. Fududeyntu waa lamid, iyadoo muhiim u tahay inay jiraan injineero badan iyo horumariyeyaal ka dambeeya lakabka xilligan.
Qaabka Realme Narzo 30 5G wuxuu ku sharraxaa naqshad avant-garde ah, oo la mid ah taleefannada kale ee astaanta, oo leh guddi ku dhowaad dhammaan shaashadda, marka laga reebo qaybta hoose ee bezel la arki karo. Kaamirada hore waa daloolsan tahay, si dhib yar ayey u qaadaneysaa meel loo isticmaalo.
Hadda oo aan u gudubno Realme GT, hal-abuurnimadu waa lagama maarmaan marka la soo bandhigayo taleefannada casriga ah ee loogu talagalay in lagu sameeyo xaalad kasta oo jirta. Shaashadu waxay ku jirtaa dhammaan qaybaha, kaliya 4% bezel la arki karo, kamaraddu, sida tan Realme Narz0 30, ayaa ah nooca daloollan, oo ku fadhiya dhinaca bidix.
Realme Narzo 30 iyo Realme GT labaduba waa la heli karaa Muddo dheer, kii ugu horreeyay ayaa dib loo bilaabay bishii Maajo 2020. Realme GT waxaa lagu dhawaaqay bilowgii Maarso inay tahay taleefanka ciyaaraha, oo ku habboon kuwa doonaya awoodda qiimaha dhabta ah ee tartanka.
Qiimaha Realme Narzo 30 5G wuxuu ku saabsan yahay 219 euro, inkasta oo uu si weyn hoos ugu dhici doono maadaama suuqii laga heli jiray in ka badan sanad. Waxyaabaha wanaagsan ayaa ah inay tahay terminal 5G qiimo jaban oo ah 300 euro, ahaanshaha ikhtiyaar la awoodi karo oo loogu talagalay isticmaale kasta oo raadinaya terminal qiimo-tayo leh.
Realme GT dhinaca kale waxay leedahay qiimayaal dhowr ah Waxay kuxirantahay qaabeynta la doortay, ha ahaato 6, 8 ama 12 GB oo RAM ah iyo 128/256 GB oo keyd ah. Moodooyinka markii hore la bilaabay waxay ahaayeen 8/128 GB oo loogu talagalay 369 euro iyo 12/256 GB oo 499 euro ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: isbarbardhiga saxda ah